‘Miaina ny fiainana feno indrindra’ dia Torohevitra mampatahotra harahina (+ Izay tokony hataonao) - Blog
‘Miaina ny fiainana feno indrindra’ dia Torohevitra mampatahotra harahina (+ Izay tokony hataonao)
Izy io dia hafatra iray izay hita tao amin'ny lahateny manentana maro tsy tambo isaina sy fitanisa isa feno aingam-panahy…
'Tandremo amin'ny tandroka ny fiainana ary aza avela handeha.'
“Iray ihany ny fiainanao, ka araraoty tsara.”
Fomba arivo hitenenana zavatra iray…
Miaina fiainana feno.
Ary toa toro-hevitra mety izany mandra-pijanonanao mba hieritreretanao azy.
Avy eo dia manomboka mahatsapa ianao fa ireo teny tsotra dimy ireo dia fototry ny olantsika be dia be.
Fotoana izao hametrahana ity fahendrena tsy hendry indrindra amin'ny sabatra ity.
mariky ny lehilahy tsy azo antoka amin'ny fitiavana
Fotoana hanesorana azy indray mandeha izao.
Mety hieritreritra ianao fa tsikombakomba fotsiny ity. Fomba iray hampiady hevitra noho izany. Mba hanamboarana volom-borona sasany.
Fa mifikitra amiko ary mieritreritra aho fa ho afaka handresy lahatra anao raha tsy izany.
Hitanareo, ny zavatra hozaraiko aminareo dia TSY tokony hampiady hevitra.
Raha toa ka marina ny adihevitra - ary mino aho fa izany dia tokony handohalika miaraka amin'ny fifanarahana hatramin'ny farany.
Eny, ny olona sasany mety ho sosotra amin'izay holazaiko, saingy izany dia satria ho fanamby ny heviny, angamba ho rava mihitsy aza.
Ny miaina ny fiainana feno indrindra dia torohevitra ratsy ho an'ny Araho ary mankany Omeo .
Izao no antony…
Mamela anao tsy afa-po amin'ny fiainana
Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa ny fiainana feno 'feno' dia andanianao isan'andro isan'andro amin'ny fiainanao - isa-minitra isaky ny adiny - ary manaova zavatra vaovao miaraka amin'izany ianao.
Tsy maintsy manandrana zava-baovao ianao, miaina zavatra hafa, mandeha any amin'izay tsy mbola hitanao, mihinana zavatra mahatalanjona.
Mila mihomehy mafy ianao, mitsiky be, mahatsapa fifaliana sy hafaliana.
Mila manamboatra fotoana tsirairay ianao a fotoana hahatsiarovana.
Saingy… be loatra ny antenaina.
Tsy izany no mitranga ny fiainana.
Tsy ny fotoana rehetra dia mety ho fara tampon'ny fahafinaretana. Tsy afaka mandany ny androm-piainanao amin'ny avo indrindra amin'ny fientanam-po sy fahafinaretana ianao.
Saingy efa nolazaina taminao fa izany no tokony ho tanjonao. Mino ianao fa izany no kasainao hatao amin'ny fiainana.
Ary rehefa tsy mahavita manaraka ny antenaina ambony sy tsy azo antenaina toy izany ianao dia mahatsiaro ho kivy. Mahatsiaro ho tsy nahomby tamin'ny fiainana ianao indraindray.
Saingy voatendry tsy hahomby ianao satria manandrana hanatratra ilay tsy takatry ny saina.
Ny fiainana marina, andavanandro dia - andao hanao ny marina - somary mandehandeha ary matetika miverimberina. Feno ny mahazatra sy ny firafitra ary mandray andraikitra ho an'ny lahasa manana ny lanjany samihafa.
Raha miezaka ny hiaina ny fiainana fatratra ianao, fanelingelenana tsy dia ilaina loatra ireo bitsika eo anelanelany ireo.
Mahatsapa ianao fa ny asanao dia enta-mavesatra izay terenao. Tsy tokony hankafizina na andrasana isan'andro. Eo fotsiny ny manome anao ny fomba handehanana amin'ny epic adventure hafa.
Mandany andro isan'andro ianao hitarihana ny tenanao any amin'izay toerana misy anao dia mitaky anao ny asanao. Mahita am-pitandremana ireo adidinao ianao mba tsy handroahan'ny lehibena anao.
Mandany isa-minitra any ianao maniry ny hahavitan'ny andro mba hahafahanao mitohy amin'ny zava-dehibe indrindra amin'ny hariva, amin'ny faran'ny herinandro, ary mandritra ireo herinandro vitsivitsy dia miala sasatra isan-taona ianao.
Eny, ny asanao dia minono fotsiny ny fiainana avy aminao.
Ary aiza isika no manomboka amin'ny fifandraisanareo?
Ny vadinao, ny namanao, ny fianakavianao - aiza izy ireo no mifanentana amin'ity fiainana ‘feno’ irinao ity?
Ny fanerena dia any amin'izy ireo mba haharaka anao fa tsy handany anao mihitsy.
Saingy, mazava ho azy, ny sasany amin'izy ireo dia tsy maintsy handiso fanantenana anao. Ary ho tezitra amin'izy ireo ianao amin'izany.
Ianao dia maniry izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy, ary raha tsy afaka manome anao izany izy ireo dia mety ho hitanao fa tsy maintsy manapaka ny fifamatorana ianao ary avelanao any aoriany.
Mihazona fenitra avo lenta ny fifandraisanao am-pitiavana ka raha vao tsapanao fa manakana anao izy ireo dia manomboka miditra ao ny fisalasalana.
Izy ireo ve no mpiara-miasa lavorary ho anao? Hisakana anao tsy hanao ireo zavatra tianao hatao ve izy ireo mba hahatonga ny fiainanao ‘feno’?
Misy olona ve any izay manonofinofy ny fiainana hifanaraka akaiky kokoa aminao?
Noho izany dia miady mafy ianao hihazona fifandraisana maharitra satria tena takiana ny takinao. Tsy te handany fotoana amin'ny olona tsy mitovy làlana stratospherika toa anao ianao.
Ny fianakavianao, na dia akaiky ny fonao aza, dia aza ‘mahazo’ anao sy ny fomba fiainanao octane avo. Ary tsy azonao ny antony maha-afa-po azy ireo miaina fiainana azo vinavinaina toa izany.
Ny vondrona mpinamana dia mety ho lehibe noho ny olona rehetra sendra anao manao hetsika tsy miato, fa ny ankamaroany dia 'namana' amin'ny heviny hoe 'mpinamana amin'ny Facebook izahay' fa tsy tena namana akaiky.
Mety hahita olona hafa ianao isan'alina amin'ny herinandro satria tsy misy namana tokan-tena afaka mitazona anao.
Saingy tsy maintsy mameno ny diarinao amin'ny takariva ianao ary amin'ny faran'ny herinandro na aminao mahatsapa fa mandany ny fiainanao ianao .
Ary rehefa tsy mahita zavatra hatao na ny olona mahita ianao dia sahirana mandany fotoana irery . Ny alina miala sasatra amin'ny feo hafa dia miala sasatra aminao.
Tsy midika akory izany fa mahatsiaro ho afa-po foana ianao noho ireo hetsika maro amin'ny fiainanao. Ary izany angamba satria diso ny antony anaovanao azy ireo…
… Mameno ny fotoananao ianao satria nolazaina ianao fa miaina feno ny fiainanao fa tsy hoe satria tianao tokoa ny manao izany.
Manao zavatra ianao raha te hanao azy ireo.
Ataonao izy ireo mba hahafahanao maka sary sy mandefa amin'ny media sosialy hanehoana amin'ny hafa ny fomba ‘feno’ sy mamelombelona ny fiainanao.
Ary avy eo ao ny lisitry ny siny. Lava loatra izany ka zara raha hitanao izay ao aminy.
Nikaroka ara-bakiteny ny Internet ianao ary nanakambana ireo lisitra 'tsara indrindra' rehetra tao anaty fandaharam-potoana iray lehibe ho an'ny fiainanao.
Hitsidika firenena betsaka araka izay tratranao ianao, hizaha ireo hetsika rehetra tsy maintsy atao ao amin'ny tsirairay, ary alaivo ohatra ny kolontsaina faran'izay betsaka.
Mikasa ny handanjalanja tendrombohitra ianao, hitsambikina avy eny amin'ny fiaramanidina, hankany amin'ny fety maro araka izay tratra, hikororoka soroka amin'ireo olo-malaza amin'ny premieres film sy lanonana fankalazana.
Te-hanomboka tombom-barotra tsy ara-bola ianao, mamorona vokatra ary mampiditra azy any amin'ny magazay, ho lasa manam-pahefana eo amin'ny sehatry ny indostria, ary zavatra hafa an-tapitrisany eny amboniny.
Fa na dia mety manandrana aza ianao dia tsy afaka mamaky zavatra haingana be fotsiny. Ary mifantoka amin'ny zavatra rehetra mbola tsy nataonao ianao.
Hitanao ny fiainanao mivoaka amin'ny fomba iray ary avy eo mahatsiaro fadiranovana ianao ary mitebiteby rehefa tsy afaka mihetsika haingana mankany amin'ny tanjonao sy amin'ny lisitry ny fanirianao.
Tonga ianao mifantoka amin'ny tanjonao farany fa tsy afaka mankafy ny dia hahatratra azy ireo ianao.
Manery ny tenanao hanao bebe kokoa ianao, ataovy haingana, ary tsy ho faly ianao raha tsy vita…
… Ary avy eo dia tonga amin'ny zavatra manaraka.
Tianao ny mikasa ny hanao ho avy. Tsy azonao atao ny mieritreritra ny zavatra rehetra hataonao.
Na maniry mafy ny hijery ireo zava-niainana mahatalanjona rehetra taloha ianao. 'Ny fotoana mahafinaritra' araka ny itiavanao azy ireo.
Raha mba afaka miverina miaina amin'ireo fahatsiarovana ireo ianao fa tsy mila miatrika ny monotony an'ny sombin-javatra eo anelanelany.
Izay ‘fotoana ankehitriny’ izay lazain'ny olona rehetra fa tokony hiainanao - mankaleo be fotsiny amin'ny ankamaroan'ny fotoana.
Ny fotoana tokana ahafahanao mahatsapa tena misy dia ireo fotoana anaovanao zavatra vaovao sy mahaliana izay manamarika feno ireo vata misy ny fiainana.
Ny fomba fisainanao dia ny hoe raha tsy feno ny fiainanao dia tsy misy dikany izany ary ity fahabangana ity dia mampatahotra anao ny helo.
Inona koa, hitanao ny fanavaozan'ny media sosialy voadinika tsara ary mino ianao fa izany no tena fomba fiainany.
Na mahita namana manao tsara kokoa noho ianao ianao ary miaina fiainana misokatra sy mahaliana kokoa ary tsapanao fa lasa lavitra any aoriana any ianao.
Ny zavatra omenao lanja indrindra dia ireo izay maneho fiainana iainana tanteraka. Fiainana toa mahomby.
Ka mitsiriritra ny trano lehibe ianao, ny fiara tsara tarehy, ny akanjo lafo vidy, ny dia lavitra, ny fomba fiaina izay milaza hoe: 'Tsara ny fiainako ary tiako ho fantatrao izany.'
Satria ny fiainana 'feno' sy ny fiainana mahomby dia iray ihany aminao.
Midika izany fa miasa ny lamosinao - na dia tsy tianao aza izany - satria hanome anao izay tadiavinao izany. Io dia hahafahanao manao ny zavatra rehetra tianao hatao.
Ary raha olon-kafa tsy mitovy fomba fijerinao ny fiainana, ianao tsarao izy ireo noho izany ary mijery tsy tsara fanahy amin'ny safidiny.
Mahita azy ireo ianao tsy manana ambition sy drive , na dia sambatra tanteraka amin'ny fiainana izay entiny aza izy ireo.
Tsy te ho toa azy ireo ianao. Tsy te hanana ny nenina izay heverinao fa hananan'izy ireo rehefa lehibe izy ireo.
Raha ny marina dia tsy te hanana nenina amin'ny fiainana ianao, satria ny nenina dia midika fa afaka nanao zavatra bebe kokoa ianao nefa tsy nanao.
Te ho faty ianao amin'ny fieritreretana fa ny fiainanao dia nofy tamin'ny fitsangatsanganana.
… Na, farafaharatsiny, izany no nolazaina anao. Izay no dikan'ny olona manoro hevitra anao hiaina fiainana feno.
Avy eo koa ireo orinasa, orinasa ary magazine izay 'mivarotra' anao fomba tsara hiainana.
Tian'izy ireo hiezaka mafy ianao hividy ny vokariny sy ny serivisiny ary handany ny volanao miasa mafy miaraka amin'izy ireo.
Hitanao ny dokam-barotra manaitaitra azy ireo ary raisinao ny hevitra ao. Azonao atao ny mahita ny mety hisian'ny ho avy ary tadiavinao izy rehetra.
Ary olana izany satria voafetra ny volanao. Zavatra maro ihany no azonao atao amin'izany.
Ny safidy ny toerana handaniana azy dia sarotra. Tsy azonao atao ny mamantatra ny fomba handanjalanjana ny fialan-tsasatra roa ho an'ny firenena manohitra gizmo vaovao mahafinaritra izay azonao aseho amin'ny olona sy amin'ny rehetra.
Ary mamonjy… “Ha!” hoy ianao, 'lalao adala izany.' Mino ianao fa tokony hifantoka anio ary handany izay azonao satria mety ho tratran'ny bus ianao rahampitso.
Ahoana ny fomba hanontaniako lehilahy amin'ny alàlan'ny lahatsoratra amin'ny fomba mahafatifaty
Fa maninona no manangona ny volanao amin'ny andro feno orana?
Izay mety ho hitan'ny olon-kafa ho tsy miraharaha dia hitanao fa fomba fiaina tsara indrindra.
Mety mikapoka mafy ny carte de crédit na indram-bola aza ianao hahazoana ireo traikefa tadiavinao ireo satria ho voaozona ianao raha manakana anao ny volanao.
Ary ny amin'ny fiantraikan'ny fomba fiainanao amin'ny olon-kafa, dia saika tsy tonga ao an-tsainao akory.
Izay fitsangatsanganana rehetra, ireo zavatra rehetra novidinao, ireo traikefa rehetra tadiavinao. Izy ireo dia miaraka amin'ny vidiny lehibe kokoa noho ilay aloanao.
Mijaly ny tontolo iainana ho an'ny vao manomboka. Avon'ny lanitra ny dian-tongotrao karbôna ary ny filanao zavatra vaovao dia midika hoe mandoro loharano voafetra toy ny tsy misy rahampitso ianao.
Saingy hiteny ianao hoe tsia amin'ny mololo plastika ary mitondra kitapo foana manodidina… ka tsara daholo, sa tsy izany?
Ary ireo olona ao anaty rojom-panolanana manome ireo zava-mahatalanjona rehetra vidianao sy ireo olona manome serivisy ankafizinao… tsy avelanao hisakana anao tsy hankafy ireo voankazo rehetra atolotry ny fiainana izy ireo.
Na dia midika aza izany fa mijaly izy ireo na araraotina mba hahafahanao mahazo ilay fiainana tadiavinao.
Tsy misy ifandraisany daholo izany. Mieritreritra ianao fa ny olona rehetra dia tokony ho afaka hitarika izay fiainana nofidiny ary nifidy iray ianao izay feno hipoka ny zava-drehetra sy izay azonao terena hiditra ao.
Mankaiza daholo izany?
Holazaiko aminao hoe aiza no tsy mitarika… ny fahasambaranao.
Araka ny eritreritro fa efa nohazavaiko tamin'ny antsipiriany araka izay azoko natao, ny filanao miaina ny fiainana feno dia tsy mamela anao hitsiky tsy tapaka eo amin'ny tavanao na adrenalinina mihombo ao amin'ny lalan-drantsika.
Miloka ny asa.
Malalaka ny fifandraisanareo.
Mahalana ianao no afaka Ankafizo ny fotoana ankehitriny .
Mandrakizay ianao manenjika ny fiainanao lavorary .
Mahatsiaro ho diso fanantenana ianao rehefa mifarana ny traikefa tsirairay.
Mikaroka ny zavatra manaraka hamenoana fotoana anao ianao.
Manao zavatra fotsiny ianao satria tsapanao fa tokony hataonao izany.
Mampitaha ny tenanao amin'ny hafa tsy tapaka ianao.
Mandeha mankany amin'ny fahitana fahombiazan'ny fahombiazana ianao.
Tsy zakanao ny mijery rehefa mipetrapetraka ny sasany amin'ny fandanilanana ny fiainany (araka ny hevitrao).
Tsy tompon'andraikitra amin'ny lafiny ara-bola ianao.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana ianao.
Ny zavatra rehetra fotsiny no tadiavinao… ary irinao izao.
Afaka mifandray amin'ny iray amin'izany ve ianao?
Mahita ny tenanao amin'ireo famaritana etsy ambony ve ianao?
Ary mbola azonao ve ny antony tsy hanomezan'ity fomba ity izay tianao?
Misy antony lehibe iray mahatonga ity fomba fiainana ity tsy hamela anao hahatsapa fifaliana…
Fandrika 20 latsaka amin'ny fianany
10 amin'ireo tononkalo tsara indrindra momba ny fiainana (+ Lesona ao anatiny)
Hevi-diso 18 mahazatra momba ny fiainana tokony hialanao
Ny fahamarinana maharikoriko momba ny fiainana izay tsy te-hilazana anao ny olona
Miankina amin'ny zavatra ivelany ny fahasambaranao
Ny fahasambarana dia teny tsy izy… raha ny tena izy, ny fahasambarana dia fihetseham-po mandalo izay tonga sy mandeha.
Antsoy hoe… fanatanterahana.
Fenomanana feno. Hitanareo ny antony mety loatra?
Na mety antsoinao hoe fahafaham-po izany.
Na inona na inona tianao hiantsoana azy, rehefa manandrana mafy ny fiainanao faran'izay mafy ianao, dia azo antoka fa manome lanja lehibe ny zavatra ataonao sy izay anananao.
Ivelanareo ireo zavatra ireo. Tsy ampahany aminao izy ireo.
Amin'ny fananana ara-nofo, miharihary izany, sa tsy izany? Ankafizinao ny mandany vola amin'ny akanjo vaovao na gadget mahafinaritra ary ny fahafinaretana azonao avy amin'izy ireo dia miankina amin'ny fanananao azy ireo.
Raha vantany vao tsy manana zava-baovao na manaitaitra ny filalaovana na fampisehoana ianao dia kivy. Ary maniry mafy ny fividiananao manaraka ianao.
Miaraka amin'ny traikefa toy ny fitsangatsanganana sy fisakafoanana ary fisitrihana scuba, mety hieritreritra ianao fa avy aminao ny fahasambarana.
Inona moa fa ny zavatra ataonao no ankafizinao?
Fa tsy izany.
Eny, mety mankafy ny tenanao ianao, fa ilay fahafinaretana dia maharitra mandritra ny faharetan'ny zavatra niainana (ary angamba vetivety ihany).
Avy eo ianao dia maniry ny hamerina azy io na mikasa ny hetsika manaraka na zavatra hamenoana ny fotoanao.
Ireo fotoana eo anelanelany ireo dia tsy vanim-potoana misy fahatanterahana, fahafaham-po ary fahasambarana lehibe.
Foanana ireo fa mijaly ianao rehefa tsy manana zavatra betsaka hipetrahana anao.
Foana izy ireo. Ary ho an'ny olona maniry hiaina fiainana feno dia mampanaintaina anao izany.
Vakio indray ity: ireo fotoana izay tsy iainanao zava-baovao, na tantara, na manaitaitra dia fotoana ahatsapanao fanaintainana.
ahoana no atao hoe lehilahy sigma
Ary na izany aza, ampahany lehibe amin'ny fiainanao io. Fizarana lehibe amin'ny fiainanao mandany fahantrana sy tsy fahafaham-po.
Toa ny karazana fiainana tadiavinao ve izany?
Manantena aho fa tsy.
Soa ihany, misy fomba hafa…
Fiainana fenoina feno
Ny fiainana ‘feno’ dia tsy tokony ho tanjona ratsy, raha mbola ny sary ‘feno’ ao an-tsainao dia iray amin'ny namboarinao manokana.
Ary raha mbola ao anatin'io sary io ireo hetsika ilaina isan'andro, toy ny asa, ny raharaha ao an-trano, ary ny adidy hafa anananao.
Ny fiainana iray 'feno' dia mety hahatafiditra fahazarana. Ny fiainana ‘feno’ dia mety hahatafiditra ny olon-tsotra.
Tsy zavatra tokony toherina ireo. Raha vantany vao manohitra zavatra iray ianao, dia esorinao ny fahafaham-po sy ny fahafaham-po rehetra azonao.
Rehefa mahita fahafaham-po ianao - na dia ny fahafinaretana aza - isan'andro, dia tsy dia mila mameno azy amin'ny zavatra hafa ianao.
Rehefa takatrao fa ny fiainana NO fitsangatsanganana lehibe indrindra amin'ny rehetra, dia tsy ho variana loatra amin'ny zavatra hafa mety handanianao ny fotoanao ianao.
Rehefa mametraka lanja amin'ny fotoana laninao amin'ny fiasana na fanadiovana ianao na famakiana boky fotsiny aza dia manome lanja ny fiainanao manontolo… fa tsy ireo sanganasa mahafinaritra ihany.
Ny zava-dehibe dia ny tsy avelanao olona hafa mamaritra ny dikan'ny hoe miaina ny fiainanao amin'ny fahafenoany.
Izany dia toy ny mandeha any amin'ny trano fisakafoanana ary mamela olon-kafa hisafidy ny menio ho anao.
Mety hiafara amin'ny fahatsapana ho feno ianao amin'ny farany, saingy tsy ho afa-po amin'ny sakafo toy ny hoe nanao ny safidinao manokana ianao.
nanao ahoana ny fahafatesan'ny zanakalahin'i flair
Mety hahatsapa ho tsy mahazo aina mihitsy ianao satria tianao ny zavatra somary maivana sy kely.
Ny 'feno' anao dia tsy voatery hitovy amin'ny an'ny 'olon-kafa' ary azo antoka fa tsy tokony hifanaraka amin'ny maodelin'ny fiarahamonina.
Raha ny tena izy, raha manaja ny fiainanao amin'ireo fahitana ivelany 'feno' ianao ary mandray ny foto-kevitr'izy ireo, dia tena manana fiainana voafehy tokoa ianao.
Lazaina aminao izay mety sy tokony hatao ary tsy dia miteny loatra ianao amin'ny raharaha.
Noho izany, angamba ny 'fahafenoanao' dia misy ny fifandimbiasana any amin'ny firenen-kafa sy ny fiaraha-misakafo hariva miaraka amin'ny namana amin'ny alin'ny herinandro…
… Fa angamba tsy izany.
Ary raha izany no izy, dia tsy mijery ireo fotoana ireo ho toy ny fananana be loatra fotsiny ianao. Ampidirinao amin'ny famaritanao ny mahazatra.
Mety hamela anao hankafy sakafo masaka masaka an-trano sy hariva hijerena ireo seho ankafizinao aza io, fa tsy hieritreritra hoe very maina fotsiny io fotoana laninao io.
Ny famaritanao ny 'feno' dia ranoka ary satria nihevitra ianao fa tokony hanao X amin'ny fotoana iray amin'ny fiainanao dia tsy midika izany fa mbola ho toy izany no hatao mandritra ny volana maromaro na taona maro mandritra ny dia ataonao.
Ny famaritanao azy dia mety misy koa ny fampidirana ao anaty indraindray ho tena fantaro ny tenanao - ny tena maha-ianao anao - ary hivoatra sy hitombo ara-panahy.
Izay irery dia mety hanampy anao hahita ny fahafenoan'ny fiainanao izao. Mety ho hitanao fa ny zava-dehibe indrindra aminao dia ny mankafy ny fiainana ananao fa tsy maniry ny hanana fiainana tsy anananao intsony.
Ary ny famaritanao ny hoe 'feno' dia mety misy efitrano hiainana. Efitra ahafahanao mahazo aina sy atiny .
Raha toa ka feno zavatra be loatra ny hevitrao fiainana 'feno' - na dia zavatra isan'andro aza - dia mety hahatsapa ho claustrophobic izany.
Alao an-tsaina fotsiny ny fiainanao ho toy ny bubble miaraka aminao eo afovoany. Raha io zavatra io dia feno zavatra tianao hatao sy zavatra mieritreritra ianao fa tokony hanao , tsy hanana efitrano hifindra ianao.
Isaky ny hitodihanao aiza ianao dia hiatrika zavatra hatao sy mahita ary hiaina. Tsy ho afaka hankafy ny habakao fotsiny ao anaty bubble ianao ary hilamina.
Ary amin'ny alàlan'ny fitazonana toerana foana, manome ny fahafahanao mamaly ny tena amin'ny fiainana.
Tsy nahantona tamin'ny fahitana henjana momba ny fomba hamenoana ny fotoanao sy ny fiainanao ianao. Azonao atao ny mandray zavatra rehefa tonga izy ireo ary manapaha hevitra amin'ny ad hoc, fa tsy ny drafitra rehetra.
Ny fomba mora azo kokoa dia tsara kokoa ihany koa ho an'ny fifandraisanareo. Tsy ho tranga hieritreretana ny vadinao mihazona anao - ho hitanao ny fomba ahafahan'ny fiananao sy ny azy ireo mifampidera.
Hanana toerana hizarana ny zavatra mahaliana azy ireo ianao… raha tianao izany.
Ary ianao tsy ho mafy dia mafy amin'ireo izay tsy manandrana manangona ny fiainany amin'ny fientanentanana sy fientanam-po. Satria ianao dia ho anisan'ireny!
Tsy hitsara azy ireo ianao - ianao MANAIKY fa miaina ny endrik'izy ireo amin'ny fiainana 'feno' izy ireo mandritra ny fiainanao ny anao.
Ho hitanao ihany koa fa ny fotoana ankehitriny dia mora kokoa aminao satria tsy ho irinao foana ny ora sy ny andro mandra-pahatongan'ny zavatra manaitaitra na mahafinaritra.
Ankehitriny, Iza no tianao kokoa?
Manantena aho fa mbola miaraka amiko ianao ary narahinao ireo teboka rehetra nolazaiko hatreto.
Ny fanontaniana, araka izany, dia ny kinovan'ny fiainana ‘feno’ no tianao?
ny fiainana feno izay tadiavinao foana ny traikefa nahafinaritra manaraka hitondra fahafaham-po anao.
ny fiainana feno izay ahafahanao mahita fahafaham-po na dia amin'ny fanaonao isan'andro sy ny adidinao aza nefa mbola mankafy dia mahafinaritra indraindray.
Raha niady hevitra tamim-pahatokisana momba ny raharahako aho dia mety hisafidy ny safidy faharoa ianao.
Ary manantena aho fa hanao izany ianao.
Mino tanteraka aho fa ny fiainana tena niaina tanteraka dia fiainana ahafahanao mamarana isan'andro sy isan'andro mahatsapa fa andro iainana tsara io.
Tsy misy iray monja amin'ny ampahany amin'ny andro izay isaina ho mendrika sy misy dikany.
Raha vonona ny hiaina ny fiainanao amin'ny fahafenoana ianao, saingy mahatsapa fa mila torohevitra fanampiny momba ny fomba hanaovana izany, dia mitenena amina mpanazatra fiainana iray izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
ahoana no hiverenana amin'ny ex narcissist
sarotra ny fifandraisana nefa mendrika izany
ahoana no hahalalana ankizivavy tia anao
bandy mijery anao amin'ny masony be
firy taona ny edmonds tracey